Tag: b2b dhata | Martech Zone
Tag: b2b dhata
UpLead: Gadzira Iyo Yakaringana B2B Prospect Rondedzero Kumagetsi Makambani uye Kuvhara Kwekutengesa
Chipiri, Kurume 23, 2021 Chipiri, Kurume 23, 2021 Douglas Karr
Kune vazhinji vanoita zvekushambadzira kunze uko vanopokana nekutenga zvinyorwa zvekutsvaga. Uye zviripo, hongu, zvikonzero zvakanaka kwazvo nei: Mvumo - idzi tarisiro hadzina kusarudza kukumbira kubva kwauri saka unoisa njodzi mukurumbira wako nekuvasvipa. Kutumira tsamba yausina kukumbira hakupesane nemitemo yeCAN-SPAM muUnited States chero bedzi uine nzira yekubuda… asi ichiri kuonekwa seyakajairika. Hunhu - zviripo
Mhedzisiro yekuunganidza nekuvandudza B2B Dhata rekushambadzira
Svondo, Gunyana 13, 2015 Douglas Karr
Pandakatanga rwendo rwangu rwemakambani ndichishandisa kuvandudza kunoramba kuripo, kumwe kutsvaga kwaienderana nekuvandudza chero maitiro kwaive kusashanda - uye nemukana wakazotevera - mukubata. Makumi emakore gare gare uye ini ndoona kuti izvi ndezvechokwadi kunyange nesangano redu. Mumwe muenzaniso ndeye apo vatengi vedu vanowana mari mukati memapoka avo. Kana iye anoita sarudzo achinja, kazhinji kacho hukama nemutengi huri panjodzi. Hazvina basa kuti isu takadii
Chitatu, November 6, 2013 Kelsey Washington
Gore rega rega, huwandu hwemari yakaiswa mumazano ekushambadzira marongero anoita kunge ari kuwedzera. Kunyanya, B2B yemukati vatengesi vanotsvaga kuwana chiziviso cherudzi, inotungamira chizvarwa, vatengi kutenga uye kuvimbika, webhusaiti traffic, uye kutengesa kuburikidza ne kwavo zvemukati zvisikwa. Sevashambadziri vanowana savvy nemazano avanoshandisa kugovera zvirimo, ndedzipi nzira, mapuratifomu, uye mafambiro ari kuunganidza mabhenefiti akakurisa? LinkedIn timu pamwe neMarketProfs uye neContent Marketing Institute ku
Zvishoma zvishoma zve data rako reB2B harisi rekare. Zoominfo inoshuma kuti 70% yedhata rese reB2B richava neshanduko imwe kana kupfuura mukati megore. Shanduro yevashandi, kukwidziridzwa, kuwanikwa, kuvharwa kwebhizinesi… zvese izvi zvinogona kutyaira mhando yedata rako rekutsvaga pasi. Idzi nyaya dzedhata dzinogona kukonzera matambudziko mune zvese kutengesa nekutengesa. Mukutengesa, kana timu yako inobuda iri kufona kana kutumira vanhu tsamba kuti vasisipo, inguva
Chipiri, June 29, 2010 Douglas Karr
Makambani mazhinji saka ini ndinoshanda nekutarisisa yakawanda yenguva yavo pane yavo epamba peji, kufamba, uye anotevera mapeji. Mazhinji acho akaputika, nemusika usingakoshi uye mapeji asina kana anoverengwa - asi vachiri kuona kuti vari kunze uko. Vagadziri nemasangano vanogara pasi vokudziridza saiti iine hukuru hukuru mupfungwa kuti inowanzoita seiyi: Vanotarisira kuti 'link juice' inoyerera nenzira kwayo kubva kune yakanyanya